အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ - Home | Facebook
Contact အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ on Messenger
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၏ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှု သမိုင်း ********************************************** မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်းနဲ့ စိုးစံနေလာရာမှ ကိုလိုနီ လက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ပုံ ၊ ကိုလိုနီလက်ထက် ~ ဆရာစံ တော်လှန်ရေး ၊ ၁၃၀၀ - ပြည့်အရေးတော်ပုံ ၊ ကျောင်းသားထုတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ၊ ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံးဖြင့် လှုပ်ရှားပုံ ၊ ရဲဘော်သုံးကျိတ်တို့ရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခခံကာ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများ ၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန် တော်လှန်ရေး ၊ လွတ်လပ်ရေး ရယူကာနီး ပင်လုံညီလာခံ ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ၊ ပြည်ထောင်စု တစ်ခုလုံး လွတ်လပ်ရေး ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းမှု ၊ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မိသားစု ဘဝ ၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လုပ်ကြံခံရပုံ နှင့် နိုင်ငံတော် ဇာပန အခန်းအနားတို့ကို စုံစုံလင်လင် " အာဇာနည်နေ့ " အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ဂုဏ်ပြုဖွယ် အတုယူလေးစားဖွယ် တင်ဆက်ထားပါတယ် ။ ၂၀၁၆-၀၇-၁၆
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ ယခုအခါ ဘာသာဝင်အချင်းချင်း အယူအဆတွေလွဲ အချင်းချင်း ကွဲနေကြတဲ့ အချိန်အခါဝယ် မြတ်တရားကို ဖီလာဆန်ကျင်ပြီး ဟုတ်သယောင်ယောင် ကိုယ်ပိုင်ထွင်တဲ့တရားများကို ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်အစစ်သဖွယ် လှည့်ဖျား ဟောကြားနေတဲ့ မိစ္ဆာဝါဒီ ကိုယ်တော်တွေ ပေါ်ထွန်း လာပြန်ပြီ ဖြစ်လေရာ သတိ ပညာ ကပ်လို့ ရှောင်ရှားကြပါလော ။ မကိုးကွယ်သင့်သော ကိုယ်တော် နဲ့ တရားများ ကြောထဲ မျောပါမသွားစေဖို့ ...... ဗုဒ္ဓသာသနာ အရှည် တည်တန့် သန့်ရှင်း ပြန့်ပွားနိုင်ပါစေ ။ ၂၀၁၆-၀၇-၁၂
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)'s post.
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) added7new photos.
ဝက်အူမကြီး - ၃၀ သား...
ဆား - အနည်းငယ် ရှလကာရည် - အနည်းငယ်
ရှလကာရည် - အနည်းငယ်
Maggi Seasoning Sauce - အနည်းငယ်
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - အနည်းငယ်
နာနတ်ပွင့် - ၂ ပွင့်
(ဝက်သား သုံးထပ်သား ဒုတ်ထိုး)
ဝက်သား သုံးထပ်သား - ၂၅ သား
ဆား & ငရုပ်ကောင်းမှုန့် - အနည်းငယ်
ကြက်အူ - ၂၀ သား
အချဉ်ရည် ၊ ငရုပ်ဆီ ၊
ဝက်အူမကြီးကို ဆား ၊ ရှလကာရည် တို့နှင့် အထပ်ထပ် အခါခါ ဆေးပါ ။
ပြီးလျင် ဝက်အူမကြီးကို Maggi Seasoning Sauce ၊ ဆား ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် တို့နှင့် နယ်ရ်ျ နှပ်ထားပါ ။
ဒယ်အိုးထဲတွင် ဆီအနည်းငယ် ထည့်ရ်ျ နှပ်ထားသော ဝက်အူမကြီးကို အရောင်နီလာသည်အထိ ထည့်ရ်ျ လှိမ့်ပါ ။
ပြီးလျင် နာနတ်ပွင့် နှင့် ရေနွေးကို ဝက်အူမကြီး မြှပ်သည်အထိ ထည့်ရ်ျ မီးအေးအေးဖြင့် တည်ပါ ။ ရေလိုက နဲနဲခြင်း ထပ်ရ်ျ ထည့်နိုင်ပါသည် ။
ဝက်အူမကြီးက ကျက်ပါက အအေးခံရ်ျ မထူမပါး လှီးရ်ျ အချဉ်ရည်နှင့် တို့ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါသည် ။
ဝက်သား သုံးထပ်သားကို Maggi Seasoning Sauce ၊ ဆား ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် တို့နှင့် နယ်ရ်ျ နှပ်ထားပါ ။
ဒယ်အိုးထဲတွင် ဝက်သား သုံးထပ်သားကို ထည့်ပြီး နာနတ်ပွင့် နှင့် ရေနွေးကို မြှပ်သည်အထိ ထည့်ရ်ျ မီးအေးအေးဖြင့် တည်ပါ ။ ရေလိုက နဲနဲခြင်း ထပ်ရ်ျ ထည့်နိုင်ပါသည် ။
ဝက်သား သုံးထပ်သားကို နူးမြည့်သည်အထိ တည်ရန် မလိုပါ ။
အသားနူးက အအေးခံရ်ျ မထူမပါး လှီးပြီး အိုးထဲမှ ဝက်သားအရည်ကို ဆန်းပြီး အချဉ်ရည်နှင့် တို့ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါသည် ။
ကြက်အူများကို ဆား ၊ ရှလကာရည် တို့နှင့် အထပ်ထပ် အခါခါ ဆေးပါ ။
ပြီးလျင် ကြက်အူများကို Maggi Seasoning Sauce ၊ ဆား ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် တို့နှင့် နယ်ရ်ျ နှပ်ထားပါ ။
ဒယ်အိုးထဲတွင် ဆီအနည်းငယ် ထည့်ရ်ျ နှပ်ထားသော ကြက်အူများကို အရောင်နီလာသည်အထိ ထည့်ရ်ျ လှိမ့်ပါ ။
ပြီးလျင် နာနတ်ပွင့် နှင့် ရေနွေးကို ကြက်အူများ မြှပ်သည်အထိ ထည့်ရ်ျ မီးအေးအေးဖြင့် တည်ပါ ။
ကြက်အူသည် နူးလွယ်ရ်ျ ရေအများကြီး မထည့်ရပါ ။ ရေလိုက နဲနဲခြင်း ထပ်ရ်ျ ထည့်နိုင်ပါသည် ။
ကြက်အူများ ကျက်ပါက အအေးခံပြီး တလုပ်စာစီ လှီးရ်ျ အချဉ်ရည်နှင့် တို့ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါသည် ။
ဝက်အူမကြီး ဒုတ်ထိုး ၊ ဝက်သား သုံးထပ်သား ဒုတ်ထိုး ၊ ကြက်အူ ဒုတ်ထိုး တို့ကို အချဉ်ရည် ၊ ငရုပ်ဆီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုပ်သီးစိမ်းတို့နှင့် တွဲဖက်ရ်ျ စားကြပါသည် ။
ဟင်းချက်နည်း နှင့် စားစရာ
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared Knowledge Village's post.
Knowledge Village added 14 new photos.
Legend of the Patriots(2010)
တောင်မြောက် ကိုရီးယားစစ်အက်ရှင်ကား ( မြန်မာစာတမ်းထိုး )
၁၉၅၀မှ ၁၉၅၃ထိဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားစစ်ပွဲကိုအခြေပြုပြီး နှစ်(၆၀)ပြည့် အခမ်းအနားကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Legend of the Patriots(2010) ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့တာပါ...ဒါရိုက်တာKim Sang-hwiနဲ့Song Hyeon-wook တို့ဟာ တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်း စစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသာမက သာမန်လူတွေစစ်အတွင်းခက်ခဲပင်ပန်းစွာ အသက်ရှင်ဖို့ရုန်းကန်သွားရတာကို အကောင်းမွန်ဆုံး ရိုက်ပြသွားပါတယ်...နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်နေ့အတွက်ရိုက်ကူးတဲ့ကားဆိုတော့ လူအင်အားတွေ လက်နက်တွေ သံချပ်ကာတိုက်ယာဉ်တွေ တိုက်လေယာဉ်တွေ အမြှောက်တွေနဲ့ တကယ့်စစ်မြေပြင်အတိုင်းဖြစ်အောင်ခမ်းနားစွာရိုက်ကူးထားပါတယ်.... ကိုရီးယားတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာသူတွေအနေနဲ့ရော စစ်ကားကြိုက်သူတွေအတွက်ရော ကြည့်ရကြိုးနပ်စေပါတယ်.....စုစုပေါင်း အပိုင်း(၂၀)ရှိပါတယ် တော်တော်များများလည်းကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ...Yangon Movie Store မှစာတမ်းထိုးဖန်​တီးတင်​ဆက်​​ထားပါသည်​....။
အလွယ်တကူ ကြည်ကြည်လေး ကြည့်နိုင်အောင် စုစည်းပေးထားတာပါ ။
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared Thandar Aung's post.
Thandar Aung added6new photos.
~ အိမ်​ရှင်​မ​တွေ အတွက်​
​ဆော့စ်​လုပ်​နည်း အမျိုးမျိုး ~
Copy paste ပါ...
မူရင်းပို့စ်​ပိုင်​ရှင်​ကို ခရက်​ဒစ်​​ပေးပါတယ်​ ။
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared i Tech Computer Centre's album.
i Tech Computer Centre added 299 new photos to the album: One Story Home Design (Collection) — with T Wai and 68 others.
တစ်ထပ်အိမ်လေး လှလှလေး ဆောက်ချင်လိုက်တာ
တစ်ထပ်အိမ်လေးတွေ စုစည်းထားတယ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အိမ်ပုံတွေ ရွေးချယ်နိုင်တယ်
အိမ်ပုံတွေများတော့ Share ထားလိုက်
All For i-TECH
i-TECH For All
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared Global Informers's video.
Posted by Global Informers
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared All Songs's video.
Posted by All Songs
All Songs is with UUTAi Olena.
WoW unbelievable stage performance
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared Mi Mi Tun's post.
Mi Mi Tun added 30 new photos — with Mi Mi Tun.
💫 🌟 💫 🌟 💫 🌟 💫 🌟 💫
မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဂျပန်က ပစ္စည်း အဟောင်းလေးတွေကုို ရောင်းချတဲ့...
ဈေးရောင်းပွဲတော်ကုို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ အတူ တနင်္ဂနွေနေ့အားလပ်ရက်တစ်ခုမှာ
သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ ဒီလုို ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကုို ရောင်းချတဲ့
ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေကုို ဂျပန်နုိုင်ငံ နေရာဒေသ အသီးသီးက ပန်းခြံလုို နေရာမျိုးတွေမှာ အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်လုို နေ့မျိုးဖြစ်တဲ့ စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေလုို နေ့မျိုးတွေမှာ ကားကြီး၊ ကားငယ် အသီးသီးထုိုးလုို့ မိသားစုလုိုက်၊ သူငယ်ချင်းလုိုက် အုပ်စုလေး
တွေနဲ့ မိမိတုို့ အသုံးမလုိုတော့တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကုို ပြန်လည် ချရောင်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုိုပစ္စည်းအဟောင်းတွေရောင်းချတဲ့ ပွဲတော်ကုို Flea Market ပစ္စည်းအဟောင်းများ ရောင်းချတဲ့ ဈေးရောင်းပွဲလုို့ ခေါ်ဝေါ်တာဖြစ်ပေမယ့် Free Market လုို့ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲနေကြသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ အဲလုိုခေါ်ဝေါ်တာလည်း သိပ်တော့မှားမယ် မထင်ပါဘူး။ မိမိတုို့ အသုံးမလုိုတော့တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကုို ဈေးကွဲချိန်တွေမှာ ပြန်မသယ်သွားချင်သူတွေက အလကားပေးဖြစ်လုိုက်တာတွေလည်း ယခင်က တော်တော်များများ ရှိခဲ့ဘူးသလုို ခုလည်း ရံဖန်ရံခါ ရှိနေတတ်သေးလုို့ပါပဲ။
နိပွန်းရောက် တစ်ကျွန်းကျ နှစ်ကြီးသမား ရွှေမြန်မာတွေ အားလုံးကတော့ ဆယ်ပြားဈေးလုို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြပါတယ်။
ဆယ်ပြားဈေးရယ်လုို့ ပြောလုိုက်ရင် ယခင်က မြန်မာတွေ အကုန်နီးပါးသိကြပြီး မရောက်ဘူးသူရယ်လုို့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ရုံးပိတ်ရက်လုို တနင်္ဂနွေလုိုနေ့မျိုးတွေ
မှာ မိမိတုို့နဲ့ နီးစပ်ရာ အားသန်ရာ ဆယ်ပြားဈေး ရှိရာတွေဆီကုို မနက်စောစောလေး ထလုို့ မိသားစုလုိုက်၊ သူငယ်ချင်း အုပ်စုလုိုက်တွေနဲ့ မိမိတုို့ လုိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းသန့်လေးတွေကုို မွှေကြ၊ နှောက်ကြ၊ ဈေးတွေစစ်ကြနဲ့ တစ်ချို့လည်း ဈေးကွဲချိန်ထိအောင် စောင့်လုို့ အလကားနီးပါး ပေးမယ့် အချိန်
ကောင်းကုိုပါ စောင့်ရင်းဝယ်ကြသူတွေ ရှိသလုို။ အထုပ်အပုိုး အသီးသီးနဲ့ ပြန်ကြ၊ ဘယ်ပစ္စည်းကောင်း ဘယ်လုိုရလုိုက်တာတွေ ပြောရင်း ကြွားရင်း ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာတွေလည်း အမှတ်ရစရာ၊ ကြည်နူးစရာတွေပါ။ ပြီးတော့ ဒီမှာလည်း ဝတ်ကြသလုို မြန်မာက ရွှေတော်မျိုးတော်တွေဆီကုိုလည်း ပုို့ကြ၊ တစ်ချို့လည်း မြန်မာမှာ ပြန်ရောင်းကြနဲ့ပေါ့ :D ။
အကြောင်းသင့်လုို့ လွမ်းဇတ်လေး နည်းနည်းခင်းရရင် ယခင် ၁၀ နှစ်ကျော်က ဂျပန်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေဟာ တစ်ဦးကုိုတစ်ဦး သိကြသလုို၊ အချင်းချင်း
လည်း ကူညီရုိုင်းပင်းကြ၊ တုိုင်းတစ်ပါးမှာ စည်းလုံးညီညွှတ်ကြသလုို မိသားစုလုို နေထုိုင်ကြတာပါ။ သာရေး၊ နာရေးတွေမှာလည်း တက်ညီလက်ညီ ပါဝင်ကြသလုို၊ အလုပ်အကုိုင် အခက်အခဲ ရှိနေရင်လည်း ကူညီရှာဖွေပေးကြသလုို အပြန်အလှန် လေးစားမူ၊ နားလည်မူတွေလည်း တော်တော်များများ ရှိကြတယ်။ ဒါတွေဟာလည်း လွမ်းစရာ ဂျပန်က ချစ်စရာ မြန်မာဓလေ့စရုိုက်တွေ အဖြစ် ခုတော့ မှုံဝါးပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဆယ်ပြားဈေးဆုိုရင်လည်း ဘယ်မှာတော့ ပစ္စည်းကောင်းတွေ ရှိနေတတ်တယ်ဟေ့ လုို့ အသိပေးအကြောင်းကြားကြတယ်။ ဆယ်ပြားဈေးဟာ မြန်မာတွေကြားမှာ ဘယ်လောက်တောင် ရေပန်းစားလည်းဆုိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ ယခင် ဧရာဝဏ်ဂျာနယ်နဲ့ ရွှေမော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်း၊ မုိုးသောက်ကြယ် ဂျာနယ်တွေမှာတောင် တစ်လစာ ဆယ်ပြားဈေး ရှိမယ့် နေရာတွေကုို စာမျက်နှာ သီးသန့်ထား ဖော်ပြပေးရတဲ့ အထိတောင် နေရာပေး ဖော်ပြပေးကြရတဲ့ အထိပါ။ Flea Market နှုတ်ကျိုးနေလုို့ ဆယ်ပြားဈေးလုို့ပဲ ခေါ်ဝေါ် ရေးသွားပေးပါမယ်။
ဂျပန်မှာက နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တုိုးတက်ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်လာတဲ့ ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းတွေကုို ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ပစ္စည်းဟောင်းတွေကုို ထားဖုို့ နေရာ ခက်ခဲမူ ရှိပါတယ်။ ဂျပန်မှာက အစားအသောက်နဲ့ အမှုိုက်အသေးအဖွဲ ပစ်တာကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အဝတ်အထည်၊ ပရိဘောဂ၊ အိမ်ထောင် ပစ္စည်းတွေ မှန်သမျှ စွန့်ပစ်မယ်ဆိုရင် အမှုိုက်ပုံမှာ ဒီအတုိုင်း စွန့်ပစ်ခွင့် မရှိတာမုို့ ပစ်မယ့်ပစ္စည်း
အမျိုးအစားကုို စွန့်ပစ်ခတန်ဖုိုးငွေ ပေးချေပြီး အဖုိုးခဆောင်ထားပြီးကြောင်း စာရွက်ကပ်ထားပေးမှသာ အမှိုက်သယ်ယူသည့်ကားက သယ်ဆောင်သွားတာပါ။
ဒီတော့ မိမိတုို့ အသုံးမလုိုသည့် ပစ္စည်းလေးတွေကုို စွန့်ပစ်ခ အဖုိုးအခလည်း မကုန် ပုိုက်ဆံပါ ပြန်ရစေပြီး အလုပ်ပိတ်ရက် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့မျိုးတွေမှာ အိမ်ကကားပေါ် ပစ္စည်းတွေတင်ပြီး ပန်းခြံတွေ၊ ကားပါးကင် အလွတ်တွေမှာ ကားလေးထုိုးပြီး ချရောင်းခြင်းဖြင့် အပျော်ဈေးရောင်း သလုိုလည်းဖြစ်၊ ဝင်ငွေလည်းရတာမုို့
အဟောင်းပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ ဆယ်ပြားဈေးက ပုိုမုိုတွင်ကျယ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခုနောက်ပုိုင်း ဂျပန်က ဆယ်ပြားဈေးတွေ တစ်နေ့တစ်ခြား နေရာအနှံအပြား တုိုးပွားလာသလုို ရောင်းချသူတွေဟာလည်း မိမိတုို့ အိမ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေ
ထုတ်ရောင်းတဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေတင် မဟုတ်တော့ပဲ ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကုို စီးပွားရေး လုပ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ရောင်းချလာသူတွေလည်း တော်တော်များလာပါတယ်။ နေရာတော်တော်များက ရပ်ကွက်တွေထဲ အထိပါ အဟောင်းဆုိုင် ဖွင့်လှစ်တဲ့ ဆုိုင်တွေကုို ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ပြီး လုပ်စားလာကြတဲ့အထိ တုိုးတက်လာပါပြီ။
ဆယ်ပြားဈေးမှာ ဘာတွေရောင်းချတာလည်း ဆုိုတော့ အိမ်သုံးပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ဂီတတူရိယာ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနဲ့ အဝတ်အထည် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း မှန်သမျှ အကုန်ရောင်းချပါတယ်။ နာမည်ကြီးတံဆိပ် အဝတ်အထည်တွေကုိုလည်း ဆယ်ပြားဈေးမှာ မွှေနိုင်၊ နှောက်နုိုင်၊ ဆစ်နုိုင်ရင် ဈေးသက်သက်သာသာ နဲ့
ရနိုင်သလုို ယခင်ကတော့ ဆယ်ပြားနဲ့တောင် ဝယ်ယူနုိုင်တာမုို့ နှစ်ကြီးသမားတွေက ဆယ်ပြားဈေးလုို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေကြခြင်း ဖြစ်ပြီး စာဖတ်သူမိတ်ဆွေဟာ
နီပွန်းနိုင်ငံကုို ရောက်ရှိနေသူဖြစ်ပါက Flea Market ဆယ်ပြားဈေးကုို အလည်အပတ်သဘောပဲဖြစ်စေ၊ မွှေချင်နှောက်ချင်လုို့ပဲ ဖြစ်စေ တစ်ခါတစ်ခေါက် လောက်တော့ သွားဖြစ်အောင် သွားလုိုက်စမ်းပါလုို့သာ တုိုက်တွန်းလုိုက်ပါရစေ။
တုိုကျိုက နာမည်ကြီးတဲ့ ဆယ်ပြားဈေး တွေကတော့  Oi Keibajo
( မြင်းပြိုင်ကွင်းရှိရာနေရာ) Tokyo Dome ( ဘေ့ဘောစ်ရုိုက်တဲ့ ကွင်းအနီး
ကစားကွင်းနေရာ) Yoyogi Park ( တုိုကျိုရဲ့ ဖက်ရှင်ရပ်ကွက်လုို့ ခေတ်စားနေတဲ့
Harajiku ဘူတာကဆင်းပြီး ၅ မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ရင် ရောက်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့နာမည်ကြီးနေရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ လက်လှမ်းမီသလောက်
ရေးပေးလုိုက်ပါတယ်။ မုိုးရွာလျှင် ဆယ်ပြားဈေး ပျက်ပါသည်။
Brands ပစ္စည်းတုတွေ ရောင်းချခွင့် မရှိပါဘူး။
⬇ တုိုကျိုက နာမည်ကြီး ဆယ်ပြားဈေးနေရာနှင့် လမ်းညွှန်
Oi Keibajo Flea Market (O-i race track) in No.1 Parking area
ရှင်နဂဝဘူတာကနေပြီး Keikyu Line ကုို ပလက်ဖောင်းနံပါတ်တစ်ကနေ
အနှေးစီးပါ။Tachigawa ဘူတာမှာဆင်းပြီး ဆယ်မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရင်
The Tokyo Dome is located near the East exit of Suido-bashi station
(JR line), A2 exit of Suido-bashi station (Toei-Mita line), A1 exit of
Kasuga station(O-edo line), and No.1,2exit of Korakuen station
(Nanboku, Marunouchi lines)
2 Jinnan Yoyogi-Kamizonocho Shibuya-ku Tokyo, onceamonth on
Saturday or Sunday, 9:00am-4:00pm
5 minute walk from Harajuku station (JR Yamanote line or 6-7 minute
walk from Meiji jingu-mae station(Chiyoda line), 10 minute walk from
Shibuya station. Next to NHK hall.
Shinjuku Nomura Building, 1-26-2 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo, Daily 10:00am – 4:00pm
The Shinjuku Nomura Building Flea Market is5minutes walk away
from West Exit of JR Shinjuku station, or3min. walk away from
Nishi-Shinjuku station(Subway Marunouchi line). It is located along
Oume Kaido (St.), across from Shinjuku Police station.
* Shinagawa Inter City Flea Market
Shinagawa InterCity, Kounan2-15-2, Minato-ku, Tokyo,
directly from the South Exit of Shinagawa station (JR lines).
တစ်ခြားမြို့မှာများလည်း ရှိပါတယ်။ ကျုိုတုိုမှာတော့ ဂျပန်ကီမုိုနုိုများ ရနုိုင်ပါတယ်။
Credit Hti Ya
Via:Moe Nat Minn
Shared by #Heain_Minn_Zar
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared AKonThi's video.
အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား ရန်တိုက်ပေးသလို မဖြစ်ရေး အနည်းဆုံးလုပ်...
Posted by AKonThi
အနည်းဆုံးလုပ်ခ အငြင်းပွားနေမှုကိစ္စ အစိုးရ မြန်မြန်ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန်၊
သို့ မဟုတ်ပါက အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကို ရန်တိုက်ပေးသလို ဖြစ်မည်ဟု
စက်မှုဇုန် ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦး ပြော
ရိုက်ကူးမေးမြန်း - သီဟ
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared ဥပဒေများ/အမိန့်ညွှန်ကြားစာများ's post.
ဥပဒေများ/အမိန့်ညွှန်ကြားစာများ added 10 new photos.
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared Putet Comics's post.
Putet Comics added5new photos.
ACK & Co Services Co., Ltd
Putet Comics တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(၁) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ/ဆရာမ - (male/female – 1)
• ဇာတ်ညွှန်းရေးသားသည့် အတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်
• ဇာတ်ညွှန်းရေးသားနည်း သင်တန်းပြီးမြောက်အောင်မြင်ထားသူ
• Creative mind-set ရှိပြီး၊ Dialogue ကအစ Stage Direction production အထိ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါက ဦးစားပေးမည်။
• ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ၊ အသင်းအဖွဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
(၂) ကလေးစာပေ၊ ပုံပြင်၊ ဆောင်းပါး ဘာသာပြန်ရေးသားသူ - (Male – 1)
• မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်သူ
• ဘာသာပြန်စာပေများ ရေးသားသည့်အတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်
• ကလေးစာပေများကို ရှာဖွေဖန်တီး ရေးသားနိုင်သူ
• Microsoft office ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သူ
• ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး ၊ အသင်းအဖွဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
• လစာ - ညှိနှိုင်း
(၃) အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ဝန်ထမ်း - (Male - 3)
• တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းအောင်မြင်ထားသူ
• အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူများလည်း လျှာက်ထားနိုင်ပါသည်။
• ဖေဖော်ဝါရီ ၊ မတ် (၂) လသာ Project Based ဖြင့်ခန့်မည်(အရည်အချင်းပေါ်မှုတည်၍ ထို(၂)လ နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်စဉ်းစားပေးမည်)
• တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• Activity ရှိလျှင် အလုပ်ချိန် ရှည်မည် (အလှည့်ကျ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်)
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရန်မလို (သင်ကြားပေးပါမည်)
• လစာ - (၁) သိန်းခွဲ
*၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ (၂၈) နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားပေးရန်*
*လျှောက်ထားလိုသူအားလုံးသည် ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ဘီယာမသောက်၊ ကွမ်းမစားသူဖြစ်ရမည်*
CV၊ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်၊ အောင်လက်မှတ် မိတ္တူများ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊
ရဲစခန်းထောက်ခံစာ တို့နှင့်အတူ လူကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ email ဖြင့်သော်လည်ကောင်း ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(မှတ်ချက် - ထောက်ခံစာ လွယ်ကူစွာမရှိနိုင်ပါက နောက်မှပေး၍ရသည်)
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် - 09 4500 56 130,
Email: hr.ackco@gmail.com (သို့) လိပ်စာ - အမှတ် (၈) ၊ အခန်း (၁၀၀၂) ၊ ပန်းခြံတာဝါ၊ ဗားဂရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared နေပြည်တော် ဖိုက်တာ's post.
နေပြည်တော် ဖိုက်တာ added5new photos.
လောက်သေရွက် အစွမ်းက အံ့မခန်းပဲ့
ယိုးဒယားကပြန်လာတဲ့ ဆရာသမားပြောလို့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း လည်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်တာ ဒီလောက်သေနဲ့မှ အရှင်းပျောက်ရောဗျာ့့
တ...ကယ်လက်တွေ့ပါ့့ နောက်ပြီး HIV ရောဂါလဲပျောက်ဆိုပဲ့့အ သုံးပြုပုံကတော့ လောက်သေရွက်အစိမ်း သုံးရွက်ခန့်ထပ် ပြီးလုံးလိုက်ဗျာ နောက်ပြီးကွမ်းဝါးသလိုသာဝါးစားလိုက့့်
အရည်ကော အဖတ်ကော မထွေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းမျိုသာချလိုက်
၇ရက်ပဲ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်စား ပျောက်ကရောဗျာ့
ကျန်တာလဲပျောက်သေးတယ့့် HIV လေ
သူ့ကျတစ်မျိုး လောက်သေရွက်ကို အခြောက်ခံ ရေနွေးနဲ့သာ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်သလိုသောက်ဗျာ တစ်လပဲ ကြာမယ်
စစ်ကြည့်ဗျာ ပိုးကောင်ရေကျပြီး ၂ လဆို အရှင်းပျောက်ကယော
အသိမိတ်ဆွေ ၁၀ ယောက်တော့ အခုပျော်နေရှာပြီလေ
ကျွန်တော်လဲ သိသမျှ ဝေဌပေးတာ စေတနာပါ့
ကျန်တာသိချင် coment မှာမေးပါ စိတ်ရှည်ရှည် ကူညီပါမယ့်
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared Waiphyo Aung's post.
‎Waiphyo Aung‎ to အခြေခံဆရာဆရာမများရင်ဖွင့်ရာ
အတန်းအားလုံးအတွက် စာမေးပွဲရက် သိရပါပြီ
Mi Mi Tun added 10 new photos.
"ဆီးချိုရှင်တို့ အားကိုးဖွယ် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ မျောက်ဥ"
မဟာမြိုင်တောတွင်း သီတင်းသုံးသောရသေ့ကြီးက ဒကာဖြစ်သူ...
” ဒကာကြီးက သိပ္ပံဆေးတွေနဲ့ကုနေတယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်
လုပ်ကြည့်ပါဆိုကာ ကျောင်သင်္ခမ်းနှင့်မလှမ်းမကမ်းတွင် နွယ်များ
(၁၅)ရက်ဆက်တိုက်ပြုတ်ကျိုသောက်ခဲ့ရာ ဆီးချိုရောဂါ သက်သာ
ရာမှ ပျောက်ကင်းခဲ့သည် ဟုဆိုပါသည်။
ခန္ခာကိုယ်၏ သွေးထဲမှ ဂလူးကို့ခေါ်အချိုဓာတ်များရှိသင့်သည်ထက် ပို၍ကာလ ကြာရှည် များပြားပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါ အစုအဝေး ဟုဆိုပါသည်။
တကယ်တော့ ဆီးချိုနဲ့သွေးချိုဆိုတာ အတူတူပါပဲဆီးချိုလို့ခေါ်
မျောက်ဥ(၂)ကျပ်သားကို ရေသန့်တစ်ဗူးစာရေထဲ့ပြုတ်ကျိုပြီး (၃)ခွက်(၁)ခွက်တင်သောက်ပေးရပါသည်။
မျောက်ဥကို အခြောက်လှန်းအမှုန့်ပြုပြီးတစ်နေ့တစ်ကြိမ် လက်ဖက်စာဇွန်း(၁)ဇွန်းစားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကြာရှည်စွာအထားခံရန်အတွက် မျောက်ဥများကို ကျောက်ချဉ်
ရည်ထဲ(၂)နာရီမှ(၃)နာရီ အထိစိမ်ပြီးမှ အခြောက်ခံ၍ ထိန်းသိမ်း
အမြစ်ဥကို ကျန်းမာရေးဓာတ်စာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အဖျားကျ
သာမန်အားဖြင့် တစ်နေ့လျှင်မျောက်ဥဆေးချိန်(၁) ကျပ်သားမှ
(၁)ကျပ်ခွဲသားအထိ ပြုတ်၍ပြုတ်ရည် အဖြစ်လည်းကောင်း၊
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ sharedapost.
Posted by Alex Tan
‎Alex Tan‎ to Team Myanmar
သင့်မှာ ကြက်ဥ ဝယ်ထားဖို့ပဲလိုပါတယ်။
မနက်စာ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတာ ပြပေးမယ်။ 🍽 ☕️
အာဒံရဲ့တွေ့မိ-တွေးရာများ shared The Irrawaddy - Burmese Edition's video.
ပျဉ်းမနား ပင်ရင်းဆိုင်တွင် တရားမ၀င် အလှကုန်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိ
Posted by The Irrawaddy - Burmese Edition
ပျဉ်းမနား ပင်ရင်းဆိုင်တွင် တရားမ၀င် အလှကုန်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိ (ရုပ်/သံ)
ဧရာဝတီ ၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၁၇